January 19, 2021 - Achawlaymyar
January 19, 2021 by Achawlaymyar
သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖြူဖွေးလာအောင် ဆေးနည်းသစ်တခု ပေးပါရစေ . . . သုံးရက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်နဲ့ကို သင့် အသားအရေ ထူးခြား သိသာလာပါလိမ့်မယ်နော် . . .။ အထူးသဖြင့် နေလောင်ထားတဲ့ ခြေ၊လက် အသားအရေအတွက် ဒီနည်းက အသုံး ဝင်လွန်းပါတယ်။ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အသားအရေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးချင်တယ် ဆိုရင် အဆင့်(၂)ဆင့် ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် . . .။ ပထမအဆင့်က ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။ scrub လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်က ခြေလက်တွေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးလာအောင် ထိန်းသိမ်းရတဲ့ အဆင့် ဖြစ်ပါတယ် . . .။ ဒီအဆင့်နှစ်ဆင့်ကို တချိန်တည်း ဆကိတိုက်ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ … Read more
ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ရုပ်ပုံ တွေကပြောပြမယ့် သင်တို့စုံတွဲရဲ့အချစ်ရေး
သင်တို့ရဲ့ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေး ကို ရုပ်ပုံ တွေကဆင့်ပြောပြတာဟာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းသလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရုပ်ပုံ တွေဟာ လူမှု စိတ်ပညာရှင် တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဖြစ် တာကြောင့် သင်တို့စုံတွဲ နဲ့ ဆင်တူတဲ့ ရုပ်ပုံ ကိုလက်နဲ့ထိပြီး သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေး အခြေအနေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ( 1 )့ စုံတွဲ အမျိုးသမီး လေးဟာ သူမရဲ့ချစ်သူ အတွက် ဂုဏ်ယူနေပြီးတော့ အဲဒီ့အကြောင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် ပြောပြချင်နေ ပါတယ်။ သူမ ကအရမ်းကို လွတ်လပ် ပျော်ရွင်နေပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ကဘယ်လိုပဲထင်ထင် သူမကဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမရွေးချယ်ထားတဲ့ ချစ်သူ က သူမအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ ထင်နေပြီးတော့ သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး က နှစ်ယောက်စလုံး အရမ်းကို ပွင့်လင်း … Read more
ရည်မှန်းချက်အတွက် ခဏတာဝေးနေရတဲ့ စုံတွဲတွေ အချစ်ပိုတိုးလာစေဖို့ ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ…
Long Distance Relationship ဆိုတာကြီးကို ဘယ်ချစ်သူစုံတွဲမှ ကြုံတွေ့ချင်းကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်ဘဝ ရည်မှန်းချက်အတွက် ခဏတာ ဝေးနေရတဲ့ ချစ်သူတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်ပိုတိုးလာချင်ရင် ဒီနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ Video Call ပြောဖို့ အချိန်ဇယားဆွဲပါ LDRS တွေအတွက် video call က လိုကို လိုအပ်ပါတယ်။ စာရိုက်တာနဲ့ ဖုန်းနဲ့စကားပြောတာတို့နဲ့ပဲ ဆိုရင်တော့ သင်တို့ရဲ့ relationship ကြီးက ခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောလို့ရမယ့် video call နဲ့ စကားပြောကြပါ။ အချိန်နဲ့တော့ ဇယားဆွဲထားပါ။ မဟုတ်ရင် အကျင့်ဖြစ်သွားရင် နှစ်ယောက်စလုံး ခံစားရသွားမယ်။ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အရာလေးတွေ လုပ်ပေးပါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးနေရတာနဲ့ပဲ ရင်ခုန်စရာကောင်းအောင် လုပ်ပေးလို့ … Read more
ကွဲနေတဲ့အသည်းကို အကောင်းအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်ဆက်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၆) မျိုး…
ပျက်စီးသွားတဲ့ အရာတွေကို အကောင်းအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ယူလို့ရတဲ့အခါရှိသလို မရတဲ့အခါတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျက်စီးသွားရင်တော့ အကောင်းအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကို သက်သာသွားအောင်တော့ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်။ သိပ္ပံပညာက ကွဲနေတဲ့အသည်းကို ပြန်မဆက်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။ အသည်းကွဲပြီး မထနိုင်၊မထူနိုင် ဖြစ်နေသူတွေအတွက် ဒီမှာ ကွဲနေတဲ့အသည်းကို အကောင်းအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်ဆက်နည်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …။ (၁) သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ… စိတ်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာ ဆက်သွယ်နေတာပါ။ အသည်းကွဲနေတဲ့အခါ စိတ်ထောင်းလို့ ကိုယ်ကြေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထောင်းတိုင်း ကိုယ်မကြေအောင် ခန္ဓာကိုယ်အားရှိအောင်ကြိုးစားရမှာပါ။ အသည်းကွဲလို့ မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို တစ်ခုပဲမေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မချစ်ဘူးလား လို့။ ချစ်တယ်ဆိုရင် များများစား များများအိပ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်က အားအပြည့်ရှိနေရင် ခံစားချက်က … Read more
လောကမှာ အချစ်နဲ့လူတိုင်း မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မရပြန်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်တွဲတော့မယ်ဆိုရင် အချစ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်လို့မရသလို၊ ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေနိုင် မပြေနိုင်ဆိုတာကလည်း တကယ်ကို အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အရာလေးတွေကတော့ သင့်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မှာ ရှိနေရမယ့် အကျင့်စာရိတ္တတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ (၁) နားလည်မှုရှိရမယ်” လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်လို့ မရပါဘူး။ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး၊ ရှေရှည်အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှုရှိမှ ရပါမယ်။ နားလည်မှုရှိတဲ့ယောကျားဆိုတာ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇ၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင်ရဲ့အမူအကျင့်အားလုံးကို သေသေချာချာသိထားပြီး နားလည်ပေးတဲ့ သူမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ပါ …။ (၂) ရင့်ကျက်တဲ့သူ” ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာ အသက်ငယ်တာ၊ ကြီးတာနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ စိတ်သဘောထား … Read more
“အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီမထင်ပါနဲ့ (စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင်တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်) ”
စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင် တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ မိန်းမ ရော့ မင်းကြိုက်တာဝယ်၊ ကြိုက်တာ သုံးဆိုတဲ့ စကားထက် မိန်းမ အပြင် အတူသွားကြမယ်လေ ပြင်ဆင်လိုက်၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့၊ စကားအသုံးပြုမှုလေးက ပိုနွေးထွေး ကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှ မဆုံတာဆိုတဲ့၊ …စကားထက် မိန်းမ ခဏတော့စောင့်ပေးနော်၊ ဗိုက်ဆာပေမယ့် အလုပ် မပီးသေးလို့ပါ ဆိုတဲ့၊ စကားအသွားအလာလေးက ပိုစိတ်ကျေနပ် စေရတာပါ။ မိန်းမ အိမ်အသုံးစရိတ်က ကုန်လှချည်လားဆိုတဲ့၊ စကားထက် မိန်းမ ကုန်ဈေးနှုန်း အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ၊.. လောက်အောင် ချင့်ချိန်ဝယ်ကြည့်ပေါ့ကွာ မလောက်ရင် ပြောပေါ့ဆိုတဲ့၊ စကားလုံးလေးတွေရဲ့ ချုပ်ထိန်းသွားမှုက ပိုမလာတဲ့ အသုံးစရိတ်နောက်မှာ စိတ်သက်သာရာ ရစေတာပါ။ မိန်းမ အချေအတင် မဖြစ်ချင်ဘူးကွာဆိုတဲ့ … Read more
တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ချစ်သူကောင်လေးအပေါ် အမြဲတမ်းလိုလို ဆိုးကြပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခါတလေ နောင်တရမိပေမယ့် ချစ်သူအပေါ်မဆိုးပဲလည်း မနေနိုင်ကြ ပြန်ပါဘူး။ ဒီလိုကောင်မလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ချစ်သူအလုပ်များတဲ့အချိန်” ချစ်သူက ဖုန်းမဆက်တဲ့အခါတွေ၊ အလုပ်အရမ်းရှုပ်တဲ့အခါတွေမှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေလို့ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီး၊ ရစ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေပါ …။ အလုပ်တွေရှုပ်လို့ ပျာယာခတ်နေတဲ့ချစ်သူကို စိတ်ကောက်ပြီး ကသိကအောက်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ချစ်သူကိုသနားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လွန်မှန်းသိပေမယ့် ဒီအကျင့်ကိုတော့ မပြင်နိုင်ကြပါဘူး …။ (၂) ဦးစားပေးခံချင်တယ်” သူတို့တွေဟာ အမြဲတမ်းဦးစားပေးခံချင်တဲ့သူတွေပါ။ တစ်လောကလုံးက ဘယ်သူနဲ့ယှဉ်ယှဉ်၊ ဘယ်လို အရာနဲ့ပဲ ယှဉ်ယှဉ် ချစ်သူအတွက် သူတို့က နံပတ်တစ်ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ချစ်သူက အရေးကြီးသွားရာရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာပေကပ်ပြီး တားတာမျိုး၊ … Read more
ကြက် သွန် နီ ဟာ မြန်မာ တို့ရဲ့ မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး ဟင်းတိုင်းလိုလိုမှာ ထည့်သွင်း ချက်ပြုတတတ် ကြပါတယ်။ အသုပ်တွေမှာလည်း ထည့်သုပ်ကြသလို ကြော်ပြီးလည်းစားကြပါတယ်။ ကြက်သွန်ဟာ စားရုံသာမက ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ အရာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်သုံးဆေးဝါးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ တရုတ်ရိုးရာ ဆေးနည်းမှာတော့ကြက်သွန်နီကို ခြေဖဝါးအောက်မှာထားပြီး အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကောင်းကျိုးများစွာရှိတယ်လို့ ဆိုစမှတ် ပြုထားပါတယ် …။ ခြေ ဖ ဝါး ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အာရုံကြောတွေ စုဆုံရာ အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးမှာရှိတဲ့ အကြောတွေကို ကောင်းမွန်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်က ကျန်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကျန်းမာစေတယ်လို့ တရုတ် ဆေးပညာ မှာ ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ … Read more
ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ အဟော…
မှဲ့တည်နေရာနှင့် အဟောတွေပါ… လူတိုင်းမှာ မှဲ့ရှိတတ်တာမို့ ကျား/မ အားလုံး (ဗဟုသုတရအောင် တင်ပေးတာပါ) ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေတာပါ။ အမှန်ကြီးပဲလို့ မပြောနိုင်သလို၊ အမှားတွေပါလို့လဲမဆိုသာပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ပါတာလေးတွေနဲ့ တိုက်ကြည်ပေါ့။ ကြိုက်လျှင်ယူ၊ မကြိုက်လျှင် ပယ်လိုက်ပါ။ ယောက်ျားတို့၏ မှဲ့ တည်နေရာနှင့် အဟော…. ( ၁ ) နဖူးပြင်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲခံရတတ်၏။ အပူသောကများလိမ့်မည်။ မိမိတွင် ရှိသည်ထက်ပို၍ လူအများက ချမ်းသာသည်ဟု ထင်မြင်တတ်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ( ၂ ) ညာဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင်ရှိလျှင် ချမ်းသာတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ လောကီစည်းစိမ်အဝဝကို သုံးဆောင် ခံစားရတတ်သည်။ ( ၃ ) ဘယ်ဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် အရက်သမား၊ ကြက်သမား၊ လောင်းကစားသမား … Read more